Fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa mahatalanjona amin'ny trano fialan-tsasatra
Fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa vahiny
Ny mpampiantrano dia mila mahay manara-maso ny antsipirian'ny fifandraisana, ny famandrihana ary ny safidin'ny olon-tiany manokana. Ny salan'isa antonony dia hampiantrano vahiny am-polony hatramin'ny an-jatony isan-taona - fantatray fa sarotra be ny manangona sy manangona ny mombamomba ny olona rehetra mijanona ao amin'ny tranonao.
Na dia azo atao aza ny manangana rafitra ivelany hihazakazaka eo akaikin'ny Channel Manager anao na System Management Management momba ny fisamborana data, mazàna tsy azo atao ny mitazona rakitsoratra momba izany ao amin'ilay rindrambaiko. Ny lojika ao ambadiky ny fitehirizana ny angona dia mazàna tsy sariaka amin'ny mpampiasa sy voafetra ny fampiasa.
Ny iray amin'ireo tanjona lehibe amin'ny fakana ny angon-drakitry ny vahiny dia ny fahafahany mitondra famandrihana mivantana amin'ny alàlan'ny fampielezana marketing amin'ny mailaka. Ny tsy fananana angon-drakitra marina sy marina dia tena manahirana tokoa ny manao marketing mivantana.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's Guest CRM manampy?
Zeevou dia manana vahiny CRM voafintina ao anatiny. Ny mombamomba ny vahiny dia azo foronina mora foana, tsy mila famandrihana vahiny ao amin'ny rafitra. Izay famandrihana nataon'io vahiny io dia mifandray sy aseho eo ambanin'ilay mombamomba ny vahiny. Raha misy famandrihana nalaina avy tao amin'ny OTA ary manavao ny antsipirihany na ny adiresy mailaka ao amin'ny Zeevou ny vahiny, dia hoharina amin'ny mombamomba ny mpitsidika azy ireo.
Ny mombamomba ny vahiny no tahiry foibe. Tsy ho an'ny famandrihana nataon'ny vahiny fotsiny fa ho an'ny fandoavam-bola rehetra ataon'izy ireo na ho azy ireo. Ny fifandanjan-kevitry ny vahiny dia mikajiana amin'ny ambaratongan'ny mombamomba ny vahiny mba hahafahanao mahita ny habetsaky ny trosan'ny vahiny aminao na amin'ny trosa. Ny crédit dia atokana ho an'ny famandrihana vaovao apetraky ny vahiny. Raha misy ny tsy fahampiana dia mila mandoa ny tsy fitovizany fotsiny ilay vahiny.
Ny CRM Vahininay koa dia ampiasaina hanampiana naoty na lahasa ary handefasana mailaka na hafatra an-tsoratra mivantana amin'ny vahiny.
Anisan'ny an'i Zeevou Dingana fanamafisana ny famandrihana 5-dingana, ny vahiny dia takiana mba hanamarina ny antsipirian'ny fifandraisana amin'ny mombamomba azy ireo. Raha tsy misy adiresy mailaka voamarina voatahiry dia mila miditra iray izy ireo. Ny adiresy mailaka mandefa OTA dia takona hahafahanao misambotra ny tena adiresy mailaka. Ao anatin'ny dingana 2, azonao atao ny manangona antsipiriany momba ny vahiny fanampiny izay hijanona ao amin'io trano io. Zeevou dia mamorona automatique profil ho an'ny olona tsirairay avy ary mampifandray izany amin'ny famandrihana.
Amboary ny tsy fivadihan'ny mpanjifanao
Ity dingana ity dia ahafahanao misambotra ihany koa GDPR-mifanaraka tsara fanekena ara-barotra. Mba hanombohana ny marketing amin'ny mailaka amin'ireo vahiny taloha dia mila manondrana fotsiny ny angona ianao ary manafatra izany amin'ny fampiharana toa MailChimp. Amboary ny tsy fivadihan'ny mpanjifanao ary mahazoa vahiny tonga isan-taona.
Zeevou dia mamela anao ihany koa hanaraka izay vahiny nahavita ny fizotran'ny fanamarinana tamin'ny alàlan'ny fanodinana famandrihana mandeha ho azy. Amin'izany fomba izany, raha misy vahiny vahininy hijanona miaraka aminao fanindroany, dia tsy voatery handalo ny fizotran'ny fanamarinana intsony izy ireo. Toy izany koa, raha misy ny vahiny ka miteraka olana dia azonao atao ny manamarina ny vahininy sy manampy ny naoty nomeny ho fampitandremana amin'ny ho avy.